Waseda University - Study in Japan. EducationBro Magazine
gaabinta : Wu
aasaasay : 1882
Ardayda (qiyaastii.) : 55000
Ha iloobin in aad wada hadlaan University Waseda
Qor at University Waseda
University Waseda haya sida mabaadi'da lagu dhisay ilaalinta ee madaxbanaanida ah ee deeqda waxbarasho, waxay u dallici codsiga wax ku ool ah ee deeqda waxbarasho, iyo korinta muwaadiniinta wanaagsan.
QABASHADA madaxabannaanida deeq sida mabda'a dhexe, University Waseda ballan-qaaday in ay gacan deeq dunida by saabsan xorriyadda cilmi-baarista sida lagama maarmaanka ah iyo isu huray si joogto ah si ay cilmi asalka.
QABASHADA codsiga wax ku ool ah oo deeq waxbarasho sida mabda'a dhexe, University Waseda ballan-qaaday in ay gacan horumarka wakhtiyada by sameynta waddo isticmaalka wax ku ool ah oo deeq waxbarasho iyo sidoo kale ku raad cilmi teori ay aawaday.
QABASHADA korinta muwaadiniinta wanaagsan sida mabda'a dhexe, University Waseda ballan-qaaday in baaqbaaq dadka qof kuwaas oo ay ixtiraamaan karo shaqsi, naftooda iyo ehelkooda horumariyaan, faa'iidaysan, quruuntii iyo bulshada, iyo firfircooni adduunka ugu waaweyn.
Isbadal ayaa dunida caalami ah iyo borderless waa xawli sanad kasta, ku saabsan qeyb kasta oo bulshada, iyo jaamacadaha waa laga reebo lahayn. Labels sida gudaha iyo dibadda lumiyaan macnaha, sida jaamacadaha dunida oo dhan tartan kordheysa kulul ee raacdada ay waxbarasho tayo leh ugu ah iyo cilmi-.
Tan iyo markii ay aasaaska, University Waseda ayaa u nugul isbeddel ah ee bulshada iyadoo la sii mabaadi'da asaasiga ah ee ay. Waxaannu Ilaah cabsila'aan ku qaaday on noocyo kala duwan oo caqabado iyo hagar la'aan eryadeen abuurnimo. Waseda ayaa la dhisay by horreeyay badan iyo dayada ay geesi embodying ruuxa aasaasay. Si kastaba ha ahaatee, sida aynu la kulmi Zaman this isbedel weyn, Waxaan ku arki sida shaqada iyo waajibaadka ee Waseda maanta si ay u tagaan dhismaha dheeraad ah oo ku saabsan dhaqanka this.
Aragtidayadu waa in ay u horseedi waxbarashada caalamiga ah iyo cilmi-. dhiga The Best Waxbarashada, Research Best, Community Best, ka dhigan tahay Ujeedada wadajir ah si ay u hantaan natiijooyinka-heer caalami ah ku raad oo dhammuba aannu marno. Waxaan aaminsanahay in hadda waa wakhtigii si ay wax miiran Weeraryahanka ruuxa ganacsiga dhaqameed Waseda ee si wax looga qabto caqabadaha badan ee haatan dunida wajahaya.
Dabcan, qaadashada on dhibaatooyinka caalamiga ah waxay u baahan tahay diyaarinta dhamaystiran, iyo waa in aan dhiso xooggeenna ah ka hor inta orgida weyn.
aasaasaha Waseda Shigenobu Okuma waxan gartaan, oo wuxuu ku yidhi "Haddii aad rabto in aad u soo duuli sare, waa in aad si qoto dheer u bartaan,"Iyo waxaan dareemay in this tilmaamay in maalmaha hore ee aan muddada ugu horeysay ee Madaxweynaha. Afarta sano ee la soo dhaafay ayaa si dhab ah u ahayd ku saabsan waxbarashada diyaarinta inuu u duulo. Wejiga kowaad ka kooban seddex gool ugu weyn:
1. Dejinta aragti cad iyo qorsheeyo orgida weyn
2. Dhis qaab nidaamsan oo ku salaysan heerka caalami
3. Xoojiyaan aasaaska dhaqaale lagama maarmaan ah in la hay'adaha kale ee heer caalami tartamaan
talaabsan ee barnaamijkan waa Waseda Himilada 150 qorshaha istaraatiijiga ah, taas oo ka hirgelisey gool iyo dadaallada muddo ilaa sanad guuradii 150aad ee Waseda 2032. In ka howgala waxbarashada, aynu hore u hirgeliyey nidaamka Quarter iyo aasaasay Xarunta Waxbarashada Global iyo Center for Studies Tacliinta Sare; gudbikaraa cilmi waxaan ku adkeeyey URA ee (Maamulaha Research University) booska at Center for Research Strategy; ee maaliyadda, waxaan ku dhiiri heerarka sare ee deeqaha iyo iminka natiijooyin wax dhaqaale caafimaad guud.
Dadaaladan waan is la soo aqoonsan yahay oo ka farxiyay soo Waseda ee doorashada sida hay'ad heer sarre ah ee barnaamijka qaran University Super Global. Iyada oo arrimuhu caalami ah oo furan ilaa jaamacadaha dunida oo adkaynaya fikirka firfircoon, barnaamijka siisaa deeqo iyo taageerada kale ee hamigeena in ay jebiyaan galay hogaanka 100 oo ka mid ah qiimeynta jaamacadaha adduunka oo ay soo saaraan 100,000 Hoggaamiyayaasha caalamiga ah muddo toban sano ah.
Jaamacadda oo dhan shaqeeyay koox ahaan si ay u gaaraan, kuwaas oo natiijada wareega koowaad ee noo ballan qaad. Hadda, ka hor raadinaya, Waxaan ka soo baxay siyaasadaha socda ee marxaladda laba, gaarno Waseda, ugu fiican.
Ku socoshada habaynta marka laga eego ardayga ee
The jilayaasha ugu waaweyn ee jaamacad yihiin ardayda, iyo qiimaha la xukumo by tayada ardayda waxaa beeraysaa oo soo diro dunida u soo baxay. Afartii sano ee la soo dhaafay, waxaan dhegaystay ardaydeena iyo go'aamiyo baahida loo qabo wacyi khayraadka aadanaha da'da soo socda. Waxaan qaaday xanuun in hirgalinta habaynta marka laga eego ardayga ee, oo ay ku jiraan horumarinta goobaha fasallada dood ku salaysan iyo furdaaminta dhibaato, ballaarinta fursadaha waxbarasho dibadeed sida barnaamijyada is-dhaafsiga iyo layliyo, iyo habeeyn ee nidaamka deeqda noo. ardayda iyo qalin, oo ay ku jiraan ardayda caalamiga ah, waa yardstick by kaas oo aan u cabbirno najaxa ee Best "ee,"Iyo sidaas u boodboodi Rafaa waxaan ka dhigi sannadaha soo socda lagu eryi doonaa by mashaariic loogu talagalay ardayda.
Jebinta la shir, qaadashada on caqabado cusub
dabeecad The horumar isku duubay by Waseda macnaheedu ma degitaanka for status quo laakiin socda meelo ka baxsan heshiiska in meel ka. dabeecad Taasi waxay noqon doontaa wadadii uu ugu muhiim u gaaro Waseda-heer caalami ah, taas oo aan odoroso.
Ururka dugsiga iyo cilmi kasta ayaa sameeyay jawaabo cusub u isbeddellada of Caalamiyeynta iyo waxbarasho maadooyinka. Our macalimiinta iyo shaqaalaha ayaa sidoo kale soo saaray fikradaha cilmi kacaan, groundbreaking content waxbarasho iyo hababka, iyo fikrado cusub oo loogu talagalay maamulka hay'adaha. diyaarinta A iyo xamaasad for caqabadaha ka qabashada ay muhiim u tahay gaaro goolka ah "Waseda our, Best ah. "Waxaan dhamaanteen waa in la abuuro fursado iyo wada shaqeeyaan si ay u gaaraan gool inta lagu jiro marxaladda labaad.
Biiriyay in ay dunida ku cilmi Waseda ee, dhaqanka iyo ruuxa
In 1913, taasoo qeyb ka ah howlgalka ku dhawaaqay by Shigenobu Okuma, University Waseda ka go'an in ay "ka qayb qaataan horumarinta aqoonta ... iyo kordhiyo saameynta iyo hawlaha ay dunida ugu weyn." Qarnigii A ka dib, da'da hadda u baahan tahay cadayn cusub dunida. Sida aan looga qabto caqabadaha ka hor, waa in aan dib-u-naga go'an in aan ogaaday howlgalka asalka ah ee University.
Nasiib wanaag, University Waseda waxaa taageera macalimiinta badan oo tayo leh, Qalinjabiyeyaasha iyo ardayda. Waxaan sidoo kale u duceeyey la dhaxalgal ah iyo dhaqan beerayaa tan 1882. Heerka labaad waxa lagu gano doonaa by dadaal daalin si loo ballaariyo meelaha Waseda ee, si uu u hoggaamiyo adduunka ee hal-abuurnimo, la drive a dhiso in ay gacan ka dunida.
Ka dib markii roadmap ee Vision ee 150 qorshe, la awood, Qalinjabiyeyaasha iyo ardayda ka shaqeeya shirkad ku dhow dhinaca Waseda, ugu fiican, Waxaan hubaa in waxa uu noqon doonaa jaamacad oo aynu wada qaadan kartaa kibir dheeraad ah ee.
Madaxweynaha Kaoru KAMATA
Dugsiyada undergraduate :
School of Science Siyaasadda iyo dhaqaalaha
Dugsiga dhaqanka, Media iyo Society
School of Humanities iyo Social Sciences
School of Science Fundamental iyo Engineering
School of Science Creative iyo Engineering
School of Science Advanced iyo Engineering
School of Sciences Bulshada
School of Sciences Sports
Graduate School of Science Siyaasadda
Graduate School of Waraaqaha, Arts oo Sciences
Graduate School of Science Fundamental iyo Engineering
Graduate School of Science Creative iyo Engineering
Graduate School of Science Advanced iyo Engineering
Graduate School of Sciences Human
Graduate School of Sciences Bulshada
Graduate School of Information Global iyo Isgaarsiinta Studies
Graduate School of Japan Applied Luuqadaha
Graduate School of Information, Production iyo Systems
Graduate School of Sciences Sports
School Okuma ee Management Dadweynaha
Graduate School of Finance, Accounting iyo Sharciga
Graduate School of Xisaabaadka
Graduate School of Deegaanka iyo Energy Engineering
Jaamacadda waxaa la aasaasay by aqoonyahan Sumarai iyo siyaasi Kacab-Zaman iyo Ra'iisul wasaarihii hore ee Ōkuma Shigenobu in 1882, oo qaatay jaamacadda horyaalka ee 1902. Waxa ay ku bilaabatay sida kulliyad saddex waaxaha hoos nidaamka jir Japanese tacliinta sare.
In 1882, jaamacadda lahaa waaxda cilmiga siyaasadda iyo dhaqaalaha, sharciga, iyo sayniska jirka. Dhinacyada waaxaha kuwan, Dabcan luqadda Ingiriisiga ah waxaa la aasaasay, halkaas oo ardayda ka mid ah wasaaradaha oo dhan baran karin, English.
Saddex sano ka dib, waaxda sayniska jirka la xiray sababtoo ah waxay lahaa codsadayaasha aad u yar. Wasaaraddu waxay sayniska iyo injineernimada la aasaasay 1908.
Wasaaraddu waxay suugaanta la aasaasay 1890.
Inkastoo Waseda si rasmi ah u qaatay jaamacad dheer ee ay horyaalka ku 1902 waxa aan ahaa ilaa 1920 in, ka wadaagaan dugsiyada kale ee Japanese iyo kulliyadaha, waxa helay aqoonsi dowladda rasmi ah sida jaamacad ka yar shuruudaha Dhismaha Jaamacadda ee caadiga.
waaxda waxbarashada la aasaasay 1903, iyo waaxda ganacsiga, in 1904.
Inta badan campus ah ayaa la burburiyay in dab qaraxyadii of Tokyo lagu jiro dagaalkii labaad ee dunida, laakiin jaamacad la dhiso, oo loo furay by 1949. Waxa uu ku koray si ay u noqdaan jaamacadda dhamaystiran leh labo dugsi sare iyo dugsiga ee farshaxanka iyo naqshadaha.
In June 12, 1950, Lixdan booliska weerareen University Waseda oo qabtay nuqulo ka mid ah warqad shuuciga-u waxyoonay u furan General MacArthur. Warqadda ayaa u furan MacArthur ahaa mid ka akhrin at bax shuuciga maal-toddobaadkii hore. Warqadda ayaa dalbaday heshiis nabad ah Japan in ka mid ah Russia iyo China shuuciga, bixitaanka ciidamada shaqo, iyo sii daayo 8 Japanese diray xabsiga weerarada 5 askari laga xoreeyo dalka ka bax shuuciga. Sarkaal ka tirsan bilayska ayaa sheegay in shirarka ugu Waseda la mamnuucay lahaa mustaqbalka, maxaa yeelay, “xubno siyaasadeed” laga yaabaa in ay isku dayaan si ay u isticmaalaan. Yuichi Eshima, Ku-xigeenka Guddoomiyaha Autonomy Ardayda ku Society, ayaa sheegay in tallaabo booliska “stupified” ardayda iyo macalimiinta, iyo in “Tani waa ka xun tallaabooyinka ilaalinta nabad prewar.”
Ma rabtaa wada hadlaan University Waseda ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
University Waseda on Map
Photos: Waseda University rasmiga ah Facebook
dib u eegista University Waseda
Ku biir si ay ugala hadlaan of University Waseda.